Apps mpilalao mozika Android tsara indrindra tokony hozahanao (2020) - App
Apps mpilalao mozika Android tsara indrindra tokony hozahanao (2020)
Androany, mozika maro no mety hifindra amin'ny fampiharana serivisy mivantana mivantana toy ny Spotify , Pandora, Apple Music , ary Google milalao mozika. Saingy mbola misy ihany ny olona izay manantona hatrany amin'ny fanangonana ireo haino aman-jery mozika satria tsy ampy ho azy ireo ny streaming.
Raha ianao koa dia manana fanangonana haino aman-jery izay tsy mety aminao, dia zahao ny fakantsary manokana ataonay ho an'ireo mpilalao mozika android tsara indrindra amin'ny android. Noho izany, eto izahay dia mandeha miaraka amin'ny lisitry ny fampiharana Android Music Player tsara indrindra.
Apps mpilalao mozika Android tsara indrindra:
Raha ny momba ny fisian'ny fampiharana mpilalao mozika android tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny fitaovana Android dia tsy mila miantehitra amin'ny fampiharana mozika tsotra vitsivitsy ianao. Raha te hihoatra ny fahatsorana ianao dia eto no hanana safidy marobe. Manarona ny entana rehetra ho anao izahay, manomboka amin'ny fampiharana mozika mivantana mifototra amin'ny rahona mankany amin'ny fampiharana mpilalao mozika feno entana sy voatanisa. Noho izany, andao hanatsara ny traikefanao mozika amin'ny fampiasana ireo fampiharana ireo.
Poweramp dia iray amin'ireo rindrambaiko android mpilalao mozika finday tsara indrindra ho an'ny mpampiasa Android marobe. Manana lohahevitra tsy manam-paharoa sy interface tsara izy io, izay azonao sintonina avy amin'ny magazay Google Play. Ny rindranasan'ny mpilalao mozika dia misy koa endri-playback mozika maro, ao anatin'izany ny crossfade, playback tsy misy banga, ary koa manohana ny playlists goavambe miaraka amin'ny fanohanan'ny Android Auto. Ho hitanao koa ny fanamboarana namboarina, ny fanovana ny tag ary ny widget.
AIMP dia mpilalao fampiharana mozika Android iray hafa izay manohana karazana mozika mahazatra indrindra, ao anatin'izany ny FLAC, MP4, MP3, ary ireo rakitra mozika maro hafa. Ireo mpihira mozika koa dia mahazo ny lohahevitra fampiantranoana, ny safidin'ny fanaingoana ary zavatra mahafinaritra hafa toa izany. AIMP dia manana normalisation volume, streaming mivantana HTTP, Equaliser miavaka, ary manangana ireo fampiharana mpilalao mozika tena ilaina. Ankoatr'izay, ny fampiharana dia manana kinova birao koa raha te-hitifitra fitaovana roa miaraka amina fampiharana iray ianao.
Ity dia iray amin'ireo fampiharana mpilalao mozika tsy-BS ary manana lafin-javatra ilaina betsaka, ao anatin'izany ny UI maivana, ny haben'ny APK kely ary ny traikefa ivelan'ny Internet. Ny rindrambaiko mozika dia misy koa equalizer marobe, filaharana marobe, tonian-dahatsoratra tag, widgets manohana, tononkira miorim-paka, ary fitetezana fampirimana.
Ity no safidy idealista indrindra ho an'ireo mpankafy mozika mila rindrambaiko mpilalao mozika milalao mozika tsy misy entana fanampiny. Ny tsara indrindra dia maimaim-poana tanteraka mba hahafahanao mankafy mozika tsy misy fividianana fampiharana.
Efatra. Pulsar Music Player
Ankehitriny, ity no fampiharana mpilalao mozika tsara indrindra azonao idirana izao. Avy amin'ny famolavolana materialy, playback tsy misy banga, fanitsiana marika, playlists mahay, farany. Fampidirana FM, scrobbling ary torimaso torimaso, hanananao ireo fiasa mahavariana rehetra ireo. Safidy tena tsara ho an'ireo izay maniry mpilalao mozika kely indrindra.
Na izany aza, tsy lafo ihany koa ny pro-dika azy ary mampiditra endri-javatra mahavariana vitsivitsy ihany. Ny zavatra manaitra indrindra dia sady kinova maimaim-poana izany ary tsy misy doka ny kinova Premium.
Ny rindrambaiko mpilalao mozika PlayerPro dia mpilalao fampiharana mozika android iray hafa manandanja miaraka amina endri-javatra mahavariana ary endrika tsotra hita maso. Ny interface tsotra dia manamora kokoa ny fampiasana azy ary afaka mametraka marina tsara ianao ho fanaingoana bebe kokoa.
Miaraka amin'ny mozika, manohana ny filalaovana horonantsary, android auto, equalizer amin'ny tarika tsy fahita firy sy ny fanohanana Chromecast, ny widgets, ny effets audio isan-karazany ary ny endri-javatra kely mahafinaritra sasany. Mpilalao mozika PlayerPro koa dia manohana mozika Hi-Fi ary afaka mahazo ny demo amin'ny $ 4.99 fotsiny.
BlackPlayer EX dia rindrambaiko mpilalao mozika mahafinaritra sy tsotra hafa. Ny olona dia afaka manamboatra sy miasa amin'ny rafitry ny takelaka. Ambonin'izany dia manana scrobbling, widgets, equalizer, tsy misy doka, ID3 tag editor, lohahevitra ary fanohanana ireo rakitra mozika mahazatra. Izy io dia manana safidy mahafinaritra ho an'ny mozika olona minimalism sy tsotra.
Mandritra izany fotoana izany, ny kinova maimaimpoana dia kely manelingelina taolana mitanjaka raha toa kosa ny kinininy karama manome endrika mahavariana kokoa. Soa ihany fa tsy lafo ny pro-dika azy mba hahafahanao mankafy ny zavatra tianao indrindra amin'ny vidiny mirary.
MediaMonkey dia mpilalao fampiharana mozika android tsara indrindra hafa izay manana lafin-javatra marobe, ao anatin'izany ny fiasa sasany toy ny podcasts, audiobooks, ary ny fahaizana mandamina hira sasany mitady amin'ny anaran'ny mpamoron-kira.
Ho fanampin'izany, ny fampiharana dia manana zavatra fototra toa ny Equalizer, ary afaka mampifangaro ny tranomboky mozika avy amin'ny PC mankany amin'ny telefaona amin'ny tamba-jotra wi-fi izy. Na izany aza, manana fametrahana fametrahana somary sarotra izy io saingy manohana endri-javatra mahavariana izay mahatonga azy io ho iray amin'ny karazany.
JetAudio dia mpilalao fampiharana mozika android ankafizin'ny mpampiasa Android satria manana fiasa manaitra nefa mahitsy isan-karazany. Ity mpilalao rindrambaiko mozika ity dia manasongadina karazana fanamafisam-peo isan-karazany izay azo alaina ho plugins miavaka hanatsarana ny traikefanao mozika.
Amin'ny lafiny atsimbadika, miaraka amina ekipa mpamaritra feo sy mozika tsotra toa ny tonian-dahatsoratry ny tag, fanamafisana ny bas, widgets, ary na ny playback an'ny MIDI aza. Ny kinova maimaimpoana sy karama dia mitovy tanteraka; ny hany maha samy hafa dia tsy misy doka ary misy lohahevitra manaitra.
9. Mpilalao Neutron
Ny rindrambaiko mpihira mozika Neutron dia mpilalao fampiharana mozika android ekena iray hafa izay malaza amin'ny olona. Izy io dia manana endri-javatra isan-karazany, ao anatin'izany ny motera fandikana audio 32/64 izay miankina tanteraka amin'ny android sy iOS. Manampy amin'ny fananana feo mozika tsara sy mazava kokoa izany.
Izy io koa dia misy endri-javatra isan-karazany, ao anatin'izany ny karazana rakitra tsy manam-paharoa, mampiantrano endri-javatra audiophile hafa, ary ekipa mampitaha azy. Na izany aza, somary lafo ihany nefa mety ho an'ny mpampiasa finday android.
Ny phonograph dia fampiharana mpilalao mozika android open source mety indrindra. Izy io dia mpizara ho azy maivana sy tsotra ary mora idiran'ny mpampiasa. Ankoatr'izay, misy UI famolavolana fitaovana kanto. Eo an-tampon'io dia afaka mahita lohahevitra marobe ianao mba hahafahanao manova ny mozika araka ny itiavanao azy.
Ireo mpampiasa ihany koa dia hahazo endri-javatra toy ny tonian-dahatsoratry ny tag, fampidirana FM, endri-javatra lisitry ny playlist, Widget an'ny efijery an-trano, ary endri-javatra maro hafa. Ity no safidy idealista indrindra hihainoana ireo hira ankafizinao nefa tsy misy zavatra manakana anao. Mandritra izany fotoana izany, ny zavatra tsara apetrak'ity rindrambaiko ity dia ho an'ny olona mozika tsy misy fividianana fampiharana amin'ny alàlan'ny Google play pass.
iraika ambin'ny folo. USB Audio Player Pro
Ity fampiharana ity dia mpanjaka amin'ny fampiharana mozika ao aminy. Ny USB Audio Player Pro dia miasa amin'ny fomba mahomby amin'ny maha-mpilalao mozika mozika azy ary miaraka amina famerenana kely tsy misy banga kely, fanohanana UPnP, EQ 10-bandy, ary UI manintona sy manohana.
Ity rindrambaiko mozika ity dia tsy afaka manohana afa-tsy 32-bit, 394 kHz miaraka amin'ny fanohanan'ny DSD, MQA, FLAC, SACD, ary codec audio am-polony. Fanampin'izay, miasa miharihary izy amin'ny alàlan'ny USB DACs sy ny HiRes DAC toa anao ao amin'ny finday avo lenta LG. Na dia lafo aza ny kinova ho azy, dia mbola izy io no mpilalao mozika tsara indrindra.
12. VLC ho an'ny Android
Farany fa tsy farany, VLC ho an'ny Android ny lisitra. Azo itokisana izy io ary misy horonan-tsary, karazana rakitra mozika am-polony, ary MKV, FLAC, MP4, ary OGG. Fanampin'izay, ny junkies media dia afaka miditra amin'ny Internet haingana amin'ny fandefasana mozika mivantana eto. Izy io koa dia mamela ny fizarana kapila ary manohana ny DVD ISO miaraka amin'ny tsipika marobe sy dikanteny.
Hanana taolana mitanjaka izay manelingelina anao amin'ny kinova maimaim-poana ianao, saingy mety izany raha mihaino mozika maimaim-poana ianao.
Ny fihainoana ny mozika tianao indrindra amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, dia afaka manatsara ny toe-tsainao ao anatin'ny iray segondra. Ankehitriny dia manana ny lisitry ny fampiharana mpilalao mozika android tsara indrindra azonao apetraka amin'ny finday avo lenta ianao ary mankafy ny entanao mozika tsy misy manahirana.
Fampiharana mozika tsara indrindra (Maimaimpoana sy karama)
Famoahana ny vanim-potoana faha-2 Arthdal ​​Chronicles: ho avy ve izany?
Faly ve ianao amin'ny Jiolahy an'ny Olomasina maro any Newark?
ahoana no hahitako raha manana amazon prime aho
ahoana no fomba ahazoana taom-pianarana netflix maimaim-poana
tranokala doka manokana toy ny Craigslist
mpanamboatra kaody fihenam-bidy Playstation fivarotana
misintona sarimihetsika maimaim-poana
Hafahafa jojo Ny Adventure vanim-potoana 1 saka anarana
sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana amin'ny streaming an-tserasera